सप्तरीको सप्तकोशीबाट एमालेले खाता खोल्यो (कुन दल कहाँ बिजयी कहाँ अगाडी) ? – YesKathmandu.com
सप्तरीको सप्तकोशीबाट एमालेले खाता खोल्यो (कुन दल कहाँ बिजयी कहाँ अगाडी) ?
काठमाडौं । प्रदेश नम्वर २ को स्थानीय तहमा नेकपा एमालेले खाता खोलेको छ । सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिकाबाट एमालेले बिजयी सुरुवात गरेको छ ।
सप्तकोशी नगरपालिकाको मेयरमा उत्तम गौतम बिजयी भएका छन् भने उपप्रमुखमा आशा चौधरी बिजयी भएका छन् । प्रदेश नम्वरमा तीन स्थानको मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ । एमालेले १ राजपाले १ र माओवादी केन्द्रले १ स्थानमा बिजयी हाँसिल गरेका छन् ।
राजपाले धनुषाको हंसपुरबाट बिजयी सुरुवात गरेको छ । हंसपुर नगरपालिकामा राजपाका रामज्ञान मण्डाल बिजयी भएका छन् । त्यसैगरी माआवादी केन्द्रले सिराहवाट बिजयी सुरुवात गरेको छ । सिराहको कर्जन्हा नगरपालिकामा माओवादी उम्मेद्धार गंगा पासवान बिजयी भएका छन् ।
विहीबार विहानसम्म नेपाली कांग्रेसले खाता खोलेको छैन । ४१ स्थानसहित अग्रस्थानमा रहेपनि कांग्रेसले बिजय सुरुवात गरेको छैन । दोस्रो स्थानमा संघिय समाजबादी फोरमले २८, एमाले २५, माओवादी केन्द्र २१ र राजपा १९ स्थानमा अग्रता लिइरहेका छन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपतिद्वारा नेपाली उत्पादनलाई लाग्ने भन्सार छुटसम्बन्धी बिधेयकमा हस्ताक्षर